Fekradaha Somali Links Contact Us Tagerayasha Farmajo & Xasan Sh: oo buux dhafiyay wadoyinka Muqdisho
Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxa soo buux dhaafiyay dadweyne jadbeesan kuwaasi oo taageero u ah musharaxiinta kala gedisan ee utaagan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Isgoyska Km4 ee magaalada Muqdisho oo kamid ah isgosyada ugu waa weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo buux dhaafiyay dadweyne lugeenaya iyo gawaari mootayaal lagu soo xardhay sawirada musharaxiinta utaagan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Taageerayaasha ugu badan ee saakay indhahaaga qabanayaan ayaa waxey codkooda kubiirinayaan musharaxiitna kala ah Mudane Farmaajo iyo Siyaasiyga Xasan Sheekh.
Dhanka kale hoteelada Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta yihiin kuwa aan meel laga joogsada laheen waxana kasocdo munaasabado is diidan oo lagu kala taageerayo musharaxiinta kutartameeso xilka madaxtinimada Soomaaliya.
dhanka kale waxa iyana si xoog leh magaalada Muqdisho kasocoto kala xod xodashadi xildhbaanada baarlamaanka Soomaaliya oo la arkayo in musharaxiinta utaagan xilka ay wakiilo dheereeya usoo dirteen soo xero galinta xildhibaano tira badan si ay ua helaan codka munayahsa ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya.
Maqaayado badan oo kuyaalo inta udhaxeysa madaxtooyada Soomaaliya iyo garoonka Muqdisho ayaa waxa maanta laga dhigay kuwo qaab lacag la'aan ah wax looga cunaayo oo ay taageerayaasha musharaxiinta loo fasaxay in maraq lacag la'aan ah cunaan.
Related Items	Sheekh Caan ahaa oo xalay kooxo hubeysani ku toogteen Magaalda Muqdisho. Wafdi ka socda Baarlamaanka Soomaaliya oo booqanaya Dadka ka barakacay Muqdisho. Maalinta Saxaafada Aduunka oo Muqdisho si weyn loogu xusay. Majaajiliiste Ow Kuu Kuu oo xalay ku geeriyooday Magaalada Muqdisho. Dhaqtar daaweeya indhaha oo maanta lagu dilay magalada Muqdisho qaar kalena lagu dhaawcay. Gar-Gaarka UK oo weli Samafal kawado qaybo katirsan Magaalada Muqdisho oo heer gaba gaba ah. Maamulihii Shirkadda Hormuud Qeeybteeda Sanca oo goor dhow lagu toogtay Muqdisho Baabuur Itoobiyaan oo lagu qarxiyey Degmada yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho. Dhegeyso Dood aad u kulul oo dhex martay Max'ed Xasan Xaad iyo Bille Qabowsade. Dhegeyso Faah Faahin ku saabsan 20 meeyo Askarta Itoobiya ah oo ku geeriyootay Uraal Miino loo dhigay Magaalada Muqdisho. MOST READ Maydka nin loo gowracay Sida Xoolaha oo kale ayaa saaka la soo dhigay Isgoyska Bakaaraha Muqdisho(Daawo Sawiro Naxdin leh). Views:35613 Daawo Dhegeyso Buraanbur Wadani ah. Views:21001 Somalia: Somaliland and the 'London Conference' - Silanyo Must Challenge Denial of Somaliland's Rights Views:20843 GAALAYSIINTA QAXOOTIGA SOOMAALIDA EE KENYA (WAR-BIXIN). Views:10591 Muuqaalka Soomaaliya Sanadka 2008!!!(Daawo Sawiro badan) Views:9845 cabdibile Views:7978 Soomaalida Finland oo Baaritaan caafimaad oo lacag la´aan ah lagu sameynayo(Warbixin Muhiim ah) Views:7435 LATEST ADDED Shabaab oo Hiiraan ku dishay dad isugu jiraa waayeel iyo caruur. War Saxaafadeed: Maxamed Saalax Anaadif iyo Saacid oo ka hadlay amaanka Mowshinkii ka dhanka ahaa Saacid oo laga laabtay kadib diblamaasiyad adag oo loo Miyiga oo laga bilaabay Cunida dalac Bilaashka & Canjeerada. (Maxaasa Kaqabsaday Arintaas) Xildhibaan muujiyay dareen ah in dadka Kismaayo Qaarkood Shabaab ku biirayaan. Xildhibaanada waday Mowshinka ka dhanka ah Saacid oo ka cawday lacago lagu kala diray. AMISOM oo ka dhawaajisay Qorshe Cusub oo kanixiyay Qaswadayaasha Maamulka Somaliland oo Waji gabax kale kala kulmay M/Yurub Banaanbaxyo kadhan ah Mooshinka Xukuumada oo Muqdisho gil gilay Xildhiban Dhalxa oo kamid ah xildhibanada Mooshinka waday oo kashifay Sir Culus